Qaramada Midoobey oo Laba Jibaareysa Mashaariicda ay ka fuliso Puntland [Sawirro+Cod] | SAHAN ONLINE
Qaramada Midoobey oo Laba Jibaareysa Mashaariicda ay ka fuliso Puntland [Sawirro+Cod]
Madaxweyne ku xigeenka Dawladda Puntland Eng. Cabdixakiim Cabdullaahi Xaaji Cumar Camey ayaa maanta oo ay taariikhdu tahay 19-4-2015 xarunta PDRC ee Garoowe uga qeyb-galay shir Hay’adda Mashaariicda u qaabilsan Qaramada midoobey ee UNOPS ku soo bandhigaysay qorshe ku aadan sidii kor loogu qaadi lahaa kaabayaasha dhaqaalaha ee Puntland.
Shirka ayaa waxaa ka soo qeyb-galay Wasiiro katirsan xukuumadda Puntland, madax ka socotay hay’adda UNOPS , agaasimayaal katirsan wasaaradaha Puntland iyo sidookale masuuliyiin kale oo lagu martiqaaday madasha shirka.
Madaxweyne ku xigeenka Dawladda Puntland Eng. Cabdixakiin Cabdullaahi Xaaji Cumar Camey ayaa sheegay in madaxda hay’adda UNOPS Puntland u yimaadeen sidii ay qiimayn ugu samayn lahaayeen kaabayaasha dhaqaalaha ee Puntland, haday ahaan lahayd Dekedaha, Gaadiidka, Garoomada diyaaradaha iyo dhammaan kaabayaasha dhaqaale ee Puntland.
” Waxaa loo baahanyahay in wasaaradkasta ay garan karto baahideedu waxa ay tahay una soo gudbin doonto madaxda hay’adda UNOPS , runtiina waxaan rajaynaynaa in sanadaha soo socda howshaan lawado lagana gun gaaro ” Ayuu yiri Eng. Cabdixakiim Camey.
Madaxweyne ku xigeenka Dawladda Puntland Eng. Cabdixakiin Cabdullaahi Xaaji Cumar Camey ayaa sidookale hay’adda UNOPS uga mahadceliyey dadaalada horumarineed ee ay kawadaan Puntland , isagoona kula dardaarmay inay sii laba jibaaraan dadaalkooda.
Markasta oo uu koboc horumarineed ku yimaado kaabayaasha dhaqaalaha ee Puntland waxay fursad iyo horumarba u tahay shacabka reer Puntland, oo had iyo jeer ay ka go’antahay sidii ay uga faa’iidaysan lahaayeen hirgelinta adeegyada horumarineed ee aasaasiga ah.